Puntland Oo Diiday Ka Qeyb Galka Shir Ka socda Muqdisho – XAMAR POST
Puntland Oo Diiday Ka Qeyb Galka Shir Ka socda Muqdisho
Sida ay sheegayaan warar aan helnay waxaa maanta hotelka Decala ee garoonka Aadan cadde magaalada Muqdisho ka furmaya wajigii 2aad ee shirkii guddiga farsamada dowladda federaalka, dowlad Hirshabelle, Koofur Galbeed iyo Gobolka Banaadir.
Shirkaan ayaa la sheegay in uu hordhac u yahay shirka la filayo in ay dhawaan magaalada Muqdisho ku yeeshaan madaxda federaalka, dowlad goboleedyadda iyo gobalka Banaadir, kaas oo looga tashanayo arrimaha doorashooyinka ee khilaafku ka taagan yahay.
Sida wararku sheegayaan, Shirkan waxaa ka maqan Dowlad Goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Galmudug.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Puntland Maxamed Ibraahim Dhabancad ayaa sheegay in aanay jirin shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo ka furmay Muqdisho.
Qaar kamida xubnaha manta shirsan ayaa bishii Febraayo wajigii 1aad ee shirkan ku yeeshay magaalada Baydhabo, kaas oo looga hadlay xubnaha guddiga doorashooyinka, xal u helidda guddiga doorashooyinka kuraasta Somaliland, xaaladda gobolka Gedo, qoondada haweenka iyo jadwalka qabsoomidda doorashada.
Waxaana markii uu dhamaaday shrikaasi war ay soo saareen guddigu ku sheegeen in xal farsamo laga gaaray dhammaan qoddobadii khilaafku ka taagnaa, iyagoo intaas ku daray in qoddobadaas ay u gudbiyeen madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, si ay u meelmariyaan.
Balse madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa qodobadaas saxiixin, iyadoo welina uu taagan yahay khilaaf adag.